Arch Linux 2019.04.1 ikozvino yave kuwanikwa neLinux Kernel 5 | Linux Vakapindwa muropa
Aaron Griffin nechikwata chake vaburitsa Arch Linux 2019.04.1, yekutanga vhezheni yeanozivikanwa system yekushandisa inosanganisira iyo Linux Kernel 5, kunyanya v5.0.5 yeLinux kernel. Uku ndiko kusunungurwa kunotevera modhi yatinoisa iko kamwe uye tinogashira zvigadziriso zvehupenyu, chimwe chinhu chandinoona chinokwezva kwazvo. Zvakare, iyi vhezheni inosanganisira zvese zvakagadziriswa izvo zvakaburitswa munaKurume 2019.
Linus Torvalds akataura kuti nhamba inoshanduka kubva pa4 kusvika pa5 yaingove nekuti aive asina zvigunwe zvekusara kuverenga kana kuwedzera kumakumbo nemaoko, asi musimudziri nenharaunda yevashandisi havabvumirane naye. Iyo Linux Kernel 5 inosanganisira kuwanda kwehurdware, Pakati payo tine FreeSync rutsigiro rwe AMD Radeon GPUs kuburikidza neakavhurika sosi AMDGPU mutyairi, iyo ichapa mufananidzo uri nani pane LCD skrini ine simba rekuvandudza mwero, uye zvimwe zvakawanda zvigadziridzo.
Arch Linux 2019.04.1 inosvika neLinux 5.0.5
Mifananidzo mitsva yeCD yave kuwanikwa pane iyo website yepamutemo kubva kuArch Linux. Kune avo vari kutoshandisa iyi inozivikanwa sisitimu yekushandisa uye vanoda kunakidzwa nenyaya dzayo dzese, kusanganisira iyo Linux Kernel 5.0.5, zvese zvavanofanirwa kuita ndeizvi:
Nyora sudo pacman -Syu.
Mirira kuti shanduko dziitwe.
Reboot, kazhinji kernel shanduko kuti itange kushanda.
Chokwadi ruzhinji rwevashandisi veArch Linux vanga vatoziva maitiro ekuvandudza yavo yekushandisa system kune yazvino vhezheni. Hazvishamisi kuti isu tiri kutaura nezve imwe yakanakisa kugoverwa kweLinux, kunyanya kune Vashandisi vepamberi. Kune vashandisi vehunyanzvi vashoma pane zvimwe zvakawanda zvinogoverwa zviri nyore kumhanyisa, isa (Live USB) uye shandisa.
Uye newe? Iwe uri mumwe weavo vari kunakidzwa neArch Linux kana avo vanosarudza yakapusa sisitimu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Arch Linux 2019.04.1: yayo yekutanga vhezheni neLinux Kernel 5 ikozvino yavapo
Maonero maviri pane iyo Linux Mint kesi